भीम रावलका लागि अग्नि सापकोटा प्रयोग तर अहिले दुश्मनी किन ? - Media Dabali
भीम रावलका लागि अग्नि सापकोटा प्रयोग तर अहिले दुश्मनी किन ?
काठमाडौं - एमाले आफ्नो फाइदाका लागि कतिसम्म गर्छ भन्ने नजिर हालैका घटनाले देखिएको छ ।
अहिले एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टाँस नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न सभामुख प्रयोग भएको उसको आरोप छ ।
तर हिजो त्यही एमालेले सभामुख सापकोटा प्रयोग गरेर भीम रावलको सांसद पद जोगाएको थियो ।
रावल सुरुमा माधवकुमार नेपाल पक्ष थिए । तर कार्यबाहक अध्यक्ष पाउने लोभमा उनी केपी ओली निकट भए । त्यसपछि उनले माधव नेपालले सहमति पालना नगरेको रिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाटै राजीनामा दिए । एमाले नेताहरूले रोक्दा रोक्दै उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिए ।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीले रावलको राजीनामा स्वीकृत नगर्न सभामुख सापकोटालाई दबाब दिए । सापकोटाले तीन दिनभन्दा बढी समयसम्म उनको राजीनामा होल्डमा राखिदिए । जबकि सभामुखले चाहेको भए त्यही दिन रावलको सांसद पद चैट हुने थियो ।
रावल अहिले ओली बफादार बनेका छन् । माधव नेपाललाई एक्ल्याउन भीम रावलको सांसद पद जोगाउन सभामुख उपयोग गर्ने ओली अहिले तिनै माधव नेपालको पद किन नखाइदेको भन्दै सभामुख सापकोटाविरुद्ध लागेका छन् ।
भीम रावलको ओलीलाई काउन्टर अट्याक, नेकपामा बबन्डर
नेकपाकाे एकता भाँडिदै : नेता भीम रावल पनि गर्जीए, 'पार्टीभित्र अनिष्ट हुँदै'
संसद सचिवालयलाई भीम रावलको पत्र : मेरो दसैँभत्ता फिर्ता लिनुस्
सभामुख सापकोटाका स्वकीय सचिवले प्रिन्सिपलको टोकिदिए औंला, दुई टाँका लगाइयो
ओलीलाई भीम रावलको दनक, संखुवासभामा आमसभा गरेपछि पार्टीको बैठक राख्न मिल्दैन भन्न मिल्छ ?
बिहिवार, कार्तिक २७ २०७७०८:१४:०४